ချန်ပီယံလိဂ် ၊ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေ အပြင် နောက်ထပ် ပြိုင်ပွဲသစ် တစ်ခုပါ ထပ်မံ ကျင်းပမယ့်အကြောင်း အတည်ပြုလိုက်တဲ့ #ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် - SPORTS MYANMAR
ချန်ပီယံလိဂ် ၊ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေ အပြင် နောက်ထပ် ပြိုင်ပွဲသစ် တစ်ခုပါ ထပ်မံ ကျင်းပမယ့်အကြောင်း အတည်ပြုလိုက်တဲ့ #ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး ဈေးကွက် ကြီးမားလာတာနဲ့ အမျှ ဥရောပ ဘောလုံးရပ်ဝန်းကလဲ သူတို့ရဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ လက်ရှိ အနေအထားက ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာဖို့အတွက် နောက်ထပ် ခြေလှမ်းအဖြစ် ပြိုင်ပွဲသစ် သစ်ခုကို ထပ်မံ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ကြောင့် အတည်ပြု တရားဝင် ကြေငြာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဥရောပ နေရှင်းလိဂ် ပြိုင်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်း ၊ UEFA ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၊ ဥရောပ တစ်ဝန်းက ကလပ်အသင်းတွေ အားလုံး ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးမျိုး ရရှိအောင် ဖန်တီးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဥက္ကဌ စီဖာရင်က ဆိုပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲသစ်ရဲ့ နာမည် ကိုတော့ UEFA Europa Conference League (UEFA ယူရိုပါ ကွန်းဖရင့် လိဂ်) လို့ အမည်ပေးထားပြီး ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို ပထမတန်း အဆင့်မှာ ရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲလို့ သတ်မှတ်မယ် ဆိုပါက ၊ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲက ဒုတိယတန်း နဲ့ အခု ကျင်းပမယ့်မယ့် ယူရိုပါ ကွန်းဖရင့်လိဂ် ကို တတိယတန်း အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အခု ပြိုင်ပွဲကိုလဲ စုစုပေါင်း အသင်း 32 သင်း ၊4သင်း အုပ်စု 8 ခု အထိ ခွဲကာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ 2021 ခုနှစ် မှာ စတင်သွားမှာပါ။
ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ စီဖာရင် ကတော့ အခုလို ကျင်းပတာဟာ ဥရောပ ဘောလုံးရပ်ဝန်း ကို ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာဖို့အတွက် နဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ ထိပ်တန်း အဆင့် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရဖို့ အခက်ခဲရှိနေတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးတွေက ကလပ်အသင်းတွေ အခွင့်အရေး ရနိုင်ဖို့ လို့ ဆိုပါတယ်။
“ ဥရောပ ကလပ် အသင်းဆင့် ပြိုင်ပွဲတွေ က အရင်ကထက်ကို ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်မှုတွေ ရှိလာတော့မှာပါ။ ကလပ်အသင်းတွေလဲ ပိုပြီး ပါဝင်ခွင့် ရရှိတော့မှာ ဖြစ်သလို ၊ ပွဲစဉ်တွေလဲ ပိုပြီး ကြည့်ခွင့် ရတော့မှာလေ။ ဒီပြိုင်ပွဲကို ဖန်တီးဖို့ အတွက် ဥရောပ ကလပ်အသင်းများ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်သလို ၊ ဥရောပ တစ်ဝန်းမှာ ရှိတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ကိုလဲ ပိုပြီး များလာအောင်ဖန်တီး ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ကျနော်တို့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ” လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်ကလပ်တွေ ၀င်ရောက် ကစားနိုင်မှာလဲ?
ယူရိုပါ ကွန်းဖရင့်လိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ အင်အား အလယ်အလတ်သာ ရှိတဲ့ ကလပ်မျိုးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဘောလုံး အင်အားနည်းတဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံငယ်လေးတွေ က ကလပ်တွေသာ ဦးစားပေး ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဥရောပ ထိပ်သီးလိဂ်5ခု လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ (အင်္ဂလန် ၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျာမဏီ ၊ အီတလီ ၊ စပိန်) တို့ကတော့ တစ်သင်းဆီသာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အနေအထားနဲ့ ပြောကြည့်ရရင် လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာ ကာရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်စွဲမယ့် ကလပ်ဟာ အဲဒီ ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာပါ။ အကယ်၍ ကာရာဘောင် ဖလားချန်ပီယံဟာ ချန်ပီယံလိဂ် (သို့) ယူရိုပါလိဂ် ၀င်ခွင့် ရရှိထားတဲ့ ဆိုရင် အဲဒီ ၀င်ခွင့်ကို ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့် 6/7/ … ထဲက အသင်း တစ်သင်းကို လွှဲပြောင်း ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စု အတွင်း တတိယ နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အသင်းတွေဟာ ၊ ယူရိုပါ ကွန်းဖရင့်လိဂ် ဆီ ကူးပြောင်း ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိသွားဦးမှာပါ။ (ချန်ပီယံလိဂ် ကနေ ယူရိုပါလိဂ်ကူးသလိုမျိုး)
ဘယ်အချိန်တွေမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားမှာလဲ
လောလောဆယ် အထိတော့ ဒီပြိုင်ပွဲကို ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ကစားလေ့ရှိတဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ညမှ ယှဉ်ပြိုင် ကစားဖို့ ကနဦး အတည်ပြုထားပါတယ်။ သို့သော် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မယ့် လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးပါက ဒီထက် စောပြီး ကစားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖီဖာ ကတော့ အခုလို ဥရောပ က ပွဲစဉ် ဆက်တိုက် တိုးချဲ့နေတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘောလုံးသမားတွေ ရဲ့ ပွဲပန်းတာတွေ ၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှာတွေ စိုးရိမ်နေတဲ့ အတွက် IFAB အစည်းအဝေး ကျရင် ၊ ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ချန်ပံယံလိဂ် အပေါ်ကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိမလဲ
ဒီပြိုင်ပွဲဟာ အထက်ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲ နှစ်ထက် အဆင့်နိမ့်တဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်လို့ ထူးခြားတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိလာမှာ မဟုတ်ပဲ ၊ ဘောလုံး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ က အလယ်အလတ် အသင်းတွေ နဲ့ အင်အားငယ် နိုင်ငံက ထိပ်တန်း အသင်းတွေ ပါဝင် ကစားနိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားခဲ့တာပါ။
ယူရိုပါ ကွန်းဖရင့်လိဂ် ဖလား ကို ဗိုလ်စွဲတဲ့ အသင်းဟာ နောက်တစ်ရာသီမှာ ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုကို တိုက်ရိုတ် ၀င်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကတော့ 2021 ခုနှစ် မှာ စတင်မှာပါ…………………….
ခနျြပီယံလိဂျ ၊ ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲတှေ အပွငျ နောကျထပျ ပွိုငျပှဲသဈ တဈခုပါ ထပျမံ ကငျြးပမယျ့အကွောငျး အတညျပွုလိုကျတဲ့ #ဥရောပ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ
ကမ်ဘာ့ဘောလုံး စြေးကှကျ ကွီးမားလာတာနဲ့ အမြှ ဥရောပ ဘောလုံးရပျဝနျးကလဲ သူတို့ရဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျထားတဲ့ လကျရှိ အနအေထားက ပိုမို ကယျြပွနျ့လာဖို့အတှကျ နောကျထပျ ခွလှေမျးအဖွဈ ပွိုငျပှဲသဈ သဈခုကို ထပျမံ ကငျြးပမှာ ဖွဈကွောငျ့ အတညျပွု တရားဝငျ ကွငွောလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာ ဥရောပ နရှေငျးလိဂျ ပွိုငျပှဲပွီး နောကျပိုငျး ၊ UEFA ရဲ့ နောကျထပျ ခွလှေမျးတဈခု ဖွဈပွီး ၊ ဥရောပ တဈဝနျးက ကလပျအသငျးတှေ အားလုံး ပါဝငျ ယှဉျပွိုငျနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးမြိုး ရရှိအောငျ ဖနျတီးလိုကျတာ ဖွဈတယျလို့ ဥက်ကဌ စီဖာရငျက ဆိုပါတယျ။
ပွိုငျပှဲသဈရဲ့ နာမညျ ကိုတော့ UEFA Europa Conference League (UEFA ယူရိုပါ ကှနျးဖရငျ့ လိဂျ) လို့ အမညျပေးထားပွီး ၊ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲ ကို ပထမတနျး အဆငျ့မှာ ရှိတဲ့ ပွိုငျပှဲလို့ သတျမှတျမယျ ဆိုပါက ၊ ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲက ဒုတိယတနျး နဲ့ အခု ကငျြးပမယျ့မယျ့ ယူရိုပါ ကှနျးဖရငျ့လိဂျ ကို တတိယတနျး အဆငျ့အဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။
အခု ပွိုငျပှဲကိုလဲ စုစုပေါငျး အသငျး 32 သငျး ၊4သငျး အုပျစု 8 ခု အထိ ခှဲကာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပွီး ၊ 2021 ခုနှဈ မှာ စတငျသှားမှာပါ။
ဥရောပ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဌ စီဖာရငျ ကတော့ အခုလို ကငျြးပတာဟာ ဥရောပ ဘောလုံးရပျဝနျး ကို ပိုမို ကယျြပွနျ့လာဖို့အတှကျ နဲ့ သမိုငျးကွောငျးအရ ထိပျတနျး အဆငျ့ ပွိုငျပှဲတှမှော ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရဖို့ အခကျခဲရှိနတေဲ့ နိုငျငံငယျလေးတှကေ ကလပျအသငျးတှေ အခှငျ့အရေး ရနိုငျဖို့ လို့ ဆိုပါတယျ။
“ ဥရောပ ကလပျ အသငျးဆငျ့ ပွိုငျပှဲတှေ က အရငျကထကျကို ပိုပွီးတော့ ကယျြပွနျ့မှုတှေ ရှိလာတော့မှာပါ။ ကလပျအသငျးတှလေဲ ပိုပွီး ပါဝငျခှငျ့ ရရှိတော့မှာ ဖွဈသလို ၊ ပှဲစဉျတှလေဲ ပိုပွီး ကွညျ့ခှငျ့ ရတော့မှာလေ။ ဒီပွိုငျပှဲကို ဖနျတီးဖို့ အတှကျ ဥရောပ ကလပျအသငျးမြား အဖှဲ့အစညျးနဲ့ သခြောတိုငျပငျပွီးမှ လုပျဆောငျခဲ့တာ ဖွဈသလို ၊ ဥရောပ တဈဝနျးမှာ ရှိတဲ့ ကလပျအသငျးတှရေဲ့ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ကိုလဲ ပိုပွီး မြားလာအောငျဖနျတီး ပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာ ကနြျောတို့ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျရဲ့ အဓိက ဦးတညျခကျြတှထေဲက တဈခုအပါအဝငျပါပဲ” လို့ ထုတျဖျော ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ဘယျကလပျတှေ ၀ငျရောကျ ကစားနိုငျမှာလဲ?
ယူရိုပါ ကှနျးဖရငျ့လိဂျ ပွိုငျပှဲဟာ အငျအား အလယျအလတျသာ ရှိတဲ့ ကလပျမြိုးတှေ အတှကျ ရညျရှယျထားတဲ့ ပွိုငျပှဲ ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ ဘောလုံး အငျအားနညျးတဲ့ ဥရောပ နိုငျငံငယျလေးတှေ က ကလပျတှသော ဦးစားပေး ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဥရောပ ထိပျသီးလိဂျ5ခု လို့ သတျမှတျထားတဲ့ (အင်ျဂလနျ ၊ ပွငျသဈ ၊ ဂြာမဏီ ၊ အီတလီ ၊ စပိနျ) တို့ကတော့ တဈသငျးဆီသာ ၀ငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှေ နဲ့ ရငျးနှီးနတေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အနအေထားနဲ့ ပွောကွညျ့ရရငျ လာမယျ့ ဘောလုံးရာသီမှာ ကာရာဘောငျ ဖလား ဗိုလျစှဲမယျ့ ကလပျဟာ အဲဒီ ပွိုငျပှဲကို ၀ငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိမှာပါ။ အကယျ၍ ကာရာဘောငျ ဖလားခနျြပီယံဟာ ခနျြပီယံလိဂျ (သို့) ယူရိုပါလိဂျ ၀ငျခှငျ့ ရရှိထားတဲ့ ဆိုရငျ အဲဒီ ၀ငျခှငျ့ကို ပရီးမီးယားလိဂျ အဆငျ့ 6/7/ … ထဲက အသငျး တဈသငျးကို လှဲပွောငျး ပေးအပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ယူရိုပါလိဂျ အုပျစု အတှငျး တတိယ နရောမှာ ရပျတညျနိုငျတဲ့ အသငျးတှဟော ၊ ယူရိုပါ ကှနျးဖရငျ့လိဂျ ဆီ ကူးပွောငျး ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိသှားဦးမှာပါ။ (ခနျြပီယံလိဂျ ကနေ ယူရိုပါလိဂျကူးသလိုမြိုး)
ဘယျအခြိနျတှမှော ယှဉျပွိုငျ ကစားမှာလဲ
လောလောဆယျ အထိတော့ ဒီပွိုငျပှဲကို ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဉျတှေ ကစားလရှေိ့တဲ့ ကွာသပတေးနေ့ ညမှ ယှဉျပွိုငျ ကစားဖို့ ကနဦး အတညျပွုထားပါတယျ။ သို့သျော ရုပျသံထုတျလှငျ့မယျ့ လုပျငနျးတှေ နဲ့ ညှိနှိုငျးပွီးပါက ဒီထကျ စောပွီး ကစားပေးဖို့ ရညျရှယျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဖီဖာ ကတော့ အခုလို ဥရောပ က ပှဲစဉျ ဆကျတိုကျ တိုးခြဲ့နတော နဲ့ ပတျသကျပွီး ဘောလုံးသမားတှေ ရဲ့ ပှဲပနျးတာတှေ ၊ ကနျြးမာရေး ထိခိုကျမှာတှေ စိုးရိမျနတေဲ့ အတှကျ IFAB အစညျးအဝေး ကရြငျ ၊ ဥရောပ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ နဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။
ယူရိုပါလိဂျ နဲ့ ခနျြပံယံလိဂျ အပျေါကို ဘယျလို သကျရောကျမှု ရှိမလဲ
ဒီပွိုငျပှဲဟာ အထကျဖျောပွပါ ပွိုငျပှဲ နှဈထကျ အဆငျ့နိမျ့တဲ့ ပွိုငျပှဲ ဖွဈလို့ ထူးခွားတဲ့ သကျရောကျမှု ရှိလာမှာ မဟုတျပဲ ၊ ဘောလုံး အငျအားကွီး နိုငျငံတှေ က အလယျအလတျ အသငျးတှေ နဲ့ အငျအားငယျ နိုငျငံက ထိပျတနျး အသငျးတှေ ပါဝငျ ကစားနိုငျဖို့ ဖနျတီးထားခဲ့တာပါ။
ယူရိုပါ ကှနျးဖရငျ့လိဂျ ဖလား ကို ဗိုလျစှဲတဲ့ အသငျးဟာ နောကျတဈရာသီမှာ ယူရိုပါလိဂျ အုပျစုကို တိုကျရိုတျ ၀ငျခှငျ့ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲကတော့ 2021 ခုနှဈ မှာ စတငျမှာပါ…………………….